Home » Fiarovan-tena amin'ny loza sy loza » Olona 26 no maty tany Bangladesh
Milentika anaty sambo feno olona feno olona ao Bangladesh mamono am-polony maro
Farafahakeliny olona 26 no maty ny alahady teo nilentika tao anaty ranomasina Shitalakshya
Nihazakazaka nandao ny tanàna ireo mpandeha taorian'ny fanambarana ny fikatonan'ny fanidiana ny firenena mandritra ny herinandro
Mateti-pitranga ny lozam-pifamoivoizana amin'ny sambo ao Bangladesh noho ny hamaroan'ny olona sy ny fikojakojana ny fiarovana azy ireo
Araka ny fampitam-baovao, farafahakeliny olona 26 no maty, rehefa nisy sambo kely roa-dabokely, nitondra mpandeha maherin'ny 50, voadonan'ny sambo mpitondra entana ary nilentika avy hatrany tany amin'ny reniranon'i Shitalakshya any Bangladesh.
Nilentika ny sambo ny alahady teo tao amin'ny reniranon'i Shitalakkhya, afovoan'i Bangladesh, tokony ho tamin'ny 6 ora hariva, ora teo an-toerana taorian'ny nandaozany ny tanànan'ny indostria Narayanganj.
Tamin'ny voalohany dia voalaza fa olona dimy no maty, fa vatana 21 hafa kosa no indray tafaverina tamin'ny alatsinainy tolakandro lasa 26 ny isan'ireo maty, hoy ny solontenan'ny Sampan-draharahan'ny Tafika sy ny Fiarovana sivily ao Bangladesh.
Feno olona nirohotra hiala ny tanàna ny sambo taorian'ny nanambarana ny fikatonan'ny fanidiana ny firenena mandritra ny herinandro manomboka anio ho fiezahana hamehezana ny fiakaran'ny tranga COVID-19 vaovao tato ho ato.
Ny feri dia be mpampiasa amin'ny fitaterana any Bangladesh, firenena iva iunana misy renirano an-jatony. Matetika koa ny lozam-pifamoivoizana dia satria be loatra ny olona ary tsy mahomby ny fikojakojana sy ny fiarovana azy ireo.